Sawirro: Noocyada tirada badan ee Shinnida malabka - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Sawirro: Noocyada tirada badan ee Shinnida malabka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 22 Novermber, 2013, 09:50 GMT 12:50 SGA
Sawirro: Noocayada kala duwan ee Shinnida malabka
Sawirro laga qaaday noocayada kala duwan ee Shinnida ayaa muujinayo in midkooda uu ka kooban yahay cagaar iyo buluug, Woqooyiga Ameerika oo kaliye waxaa ku nool 4,000 oo nooc oo Shinni ah. Dunida kale waxaa ku nool 20,000 oo nooc oo kala duwan.
Sayansyahannada ayaa sheegaya in Shinnida ay qeyb muhiim ka tahay noolasheenna iyo taariikhda dunida.
Shinnida waxay mas'uul ka tahay bacriminta 75 boqolkiiba geedaha adduunka.
Labka iyo dhidigga Shinnida ayaa kala midb ah inta badan. Shinnidan waa mid dhiddig ah.
Labku sidan ayuu u egyahay. Shinnida aad ayay u habaysan tahay.
Kooxda sawirradan qaadday ayaa la aasaasay sanadkii 2004-ta intaasna waxay baaritaan ku samaynayeen noocyada kala duwan ee Shinnida malabka.